Wholesale White PE Plastic Tunnel Greenhouse 8x3x2m Tende uye Greenhouse | Kukunda
Chena Pe PePurasitiki Tunnel Greenhouse 8x3x2m
Iyi greenhouse ine chifukidziro chakazara chakavharwa inogona kugadzira inodziya uye yakakwira mwando nharaunda nharaunda, izvo zvinogona kukubatsira iwe kukura yakakura zvakasiyana miti.
2) Iyo chifukidziro chinoshandisa rinorema-basa pachena rinosimbiswa polyethylene zvinhu izvo UV inodzivirirwa uye 100% isapinda.
3) Zippered musuwo wekupinda nyore kupinda mukufamba-mune chimiro che greenhouse.
Model Nhamba WS-GH832
Item zita Chena Pe PePurasitiki Tunnel Greenhouse 8x3x2m
Kukura kwechigadzirwa 26x10x7ft (8x3x2m)
Chakafukidza zvinhu 140gsm chena PE pajira riya
Chimiro spec. Dia 25/19 * 0.8mm kwakakurudzira simbi sepombi
Iyi greenhouse inowedzera mwaka wako wekukura nekuchengetedza gore, zvinogara, michero, miriwo uye michero yakaoma kubva kuchando. Greenhouse yedu inoshandisa tunnel dhizaini kuti igadzikane uye inyore kutarisira nekutarisira huwandu hwakawanda hwezvirimwa.
Iyo greenhouse yakagadzirisa heavy-basa simbi sisitimu uye yakasimba ivhu tambo uye matanda epasi anogadzira yakagadzikana, yakavimbika chimiro inogona kugara kwenguva yakareba, hapana chikonzero chekufunganya nezve ngura & kuora. Yakagadzirirwawo 4 slant bracing machubhu, uye yepakati yakasimbiswa machubhu ekusimudzira kudzikama.
Mamwe mafoto akajeka anokupa iwe nzwisiso yakazara yezvigadzirwa zvedu. Kuvharidzirwa kwakapoteredzwa negirobhuvhu kunoita kuti iyo greenhouse isapinde uye ive yakachengeteka, kuitisa jury muvhu, kana kushandisa zvidhinha, bhegi rejecha kana zvimwe zviyero zvakakomberedza mativi kusimudzira kugadzikana.
Yakavandudzwa 2-rukoko gobvu rakavhara pamwe nekusimbisa mesh yakaumbwa mukati maro, inodzivirira zvirimwa kubva kunaya, zuva uye pachena chivharo rega 85% yezuva kukanda greenhouse. Iyo yakawedzerwa chivharo dhizaini inovhara zvirinani nehurefu hunyoro & tembiricha yezvirimwa Sanganisa zvese zvako zvirimwa munzvimbo imwechete, yakachengetedzwa nzvimbo iyo inokubatsira iwe kukura nekutarisira zvirimwa kwegore-rose uye unodzivirira michero, miriwo, uye maruva kubva kune zvakashata zvinhu.
Yakapetwa kaviri musuwo wepamberi uye gumi nemaviri mafuro ekunze akagadzirirwa kuyambuka kufefetedza uye kuburitsa pamazuva anopisa. Yakazara yakavharika chivharo inochengetedza yakakwira mwando mazinga ekukura etropical zvirimwa, miriwo, michero yemichero uye miriwo.
Pashure: Kunze Kunopisa Kutengesa Matende Ezviitiko Party
Zvadaro: Matende Ezviitiko Zvekunze Wholesale 6x12m
Plastic Tunnel Green House Yekurima 6x3x2m